Anisan’ny firenena milefitra indrindra amin’ny fahapelahana aty Afrika i Cap Vert sy i Mozambika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Novambra 2020 4:13 GMT
Natao tao an-tanàndehiben'i Maputo, nandritra ny Andro Lavitra Fanavakavahana (01.03), nanomboka tamin'ny fakan-kevitra nataon'ny Afrobarometatra mampiseho ny “Fahaleferana aty Afrika” ny famoahana ireo firaketana mampiseho ny tondrom-pandeferana aty Afrika. Toy izany koa no natao tany amin'ny firenena Afrikana miisa 33, ho an'ny olona miisa 2.400 ananana taham-pitokisana 95%.
Tambajotra-pikarohana Pan-Afrikana tsy mitanila izay manao fikarohana momba ny fomba fijerin'ny vahoaka mikasika ny demokrasia, ny fitantanam-panjakana, ny raharaha ara-toekarena sy ny olana mifandraika amin'izany ao amin'ny firenena miisa 30 mahery aty Afrika ny Afrobarometatra. Misy amin'ny teny Anglisy, Frantsay ary Portiogey ny tatitra mitondra ny lohateny hoe “Mpifanila vodirindrina mahafinaritra? Maneho fandeferana ambony ho an'ny maro, fa tsy ho an'ny rehetra ny Afrikana”.